SingForYou.net - Nha Ko Tu Chit Tha Mya
Nha Ko Tu Chit Tha Mya
Tags : နှစ်ကိုယ်တူကစ်သမျှ...း)
By : philtre on Feb 20, 2010
Categories: Classical Duets
Score: 90 Rating: 5.00 Comments: 23
Nha Ko Tu Chit Tha Mya's Description
ချစ်သူငယ်ချင်း pp01 က သွပ်သွပ်နဲ့လိုက်ပါတယ်လို့ရွေးပေးလာတဲ့ဒီသီချင်းကို သယ်ရင်များအားလုံးအတွက် သီဆိုပေးလိုက်ပါတယ်... နားဆင်အားပေးကြတဲ့ ချစ်သောတရှင်အပေါင်း... ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း....း)
ta yout htal so nay ya lar thut yay.......dar kyaung. pyaw tar pop.......naut takhar so khinee tae thu ko.......twel so pay mae lu par shar khinee..........kg lite tae aso.....******
KoBurma on Feb 20, 2010 0
၂ကိုယ်တူ တဲ့ ... ၈ဆတဲ့ ၁မိုးအောက် ၁ယောက်တဲ့... ဘာတွေလဲ ချဲဂဏန်း ပေးတာလား .... ??? သွပ်သွပ် ပေးတဲ့ နံပါတ် ဆိုပေါက်နိုင်တယ် .... သွပ်သွပ် က ခပ်ပေါက်ပေါက် လေ ... ဆိုသမျှ သီချင်း လူကြိုက်များပြီး ပေါက်တာကိုပြောတာပါ .... ဟက်ဟက်ဟက်စ် .... ဆိုထားတာ အားကြီးကောင်းတယ် သွပ်သွပ်ရေ။ သွပ်သွပ်အသံနဲ့ တကယ်လိုက်တယ်။ ... အင့်၅ စ...တားးးးစ်းးးး .. :):P:D ... (ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့လူမှုရေး ကရှိသေးတယ် ... မြှောက်ပေးမှ မဟုတ်ရင် မြန်မာသံ သီချင်းဆိုမယ့်သူ မရှိတော့ဘူး).... အလဂါးပြောတာ ဒဂယ် နားထောင်လို့ ကောင်းတယ် ... ညလေး .... ၅စတားစ် ... ဩ... ညလေးတွေကို မန့် ရင်း အရှိန်လွန်သွားတာ ... . ဟက်ဟက်ဟက်စ် .... နားထောင်လို့ ကောင်းတယ် ... သွပ်သွပ် .... ၅စတားစ် ... :P:):D
ကောင်းလှချည်လားဗျ သွပ်သွပ် ရ ရှယ်ပဲဗျာ အားပေးသွားပါတယ် ကိုသွပ်သွပ် ရေ နှစ်ကိုယ်တူ ခြစ်သမျှတွေ အုန်သီး ပါ အုန်ထမင်း ချက်စားဘို့ အပြိုင်အဆိုင် ခြစ်နေကြပါသည် ဟီးဟီး သွပ်သွပ်ရေ ဘယ်ဒူ နဲ့ လဲဟင်
pp01 on Feb 20, 2010 0
ငသွပ်ကြီးဒီသီချင်းနဲ့လဲတကယ်လိုက်တာကတကြောင်း အဟီးဟီး::Dဟိုတနေ့ကသူဆိုထားတာတွေ့လို့ment မလို့ရေးနေတုန်းdelete လုပ်လိုက်လို့အီဖေကို့ commentလေးလဲအလကာဖြစ်မသွားအောင်မြောက်ပင့်ပြီးပြန်ဆိုခိုင်းလိုက်တာ ။ ရှစ်ကဗာတိုင်အောင်နှစ်ကိုယ်တူရှစ်ဆကဲပြီးသွပ်လဲတပုံတပင်အားရပါးရ..ရှစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားဟေ့::D*****
brownlay on Feb 20, 2010 0
yay lel kg tal ..... thanks for your wishes too ***********!
returnofdoeka4 on Feb 20, 2010 0
whitekisslay on Feb 20, 2010 0
Bro thout thout pot ta te myit tar kyaunt shwin lann chann myae swar nal...2ko tuu chit tha mya ko narr sinn arrr payy twer par kyaung:so twer tar imatan kaung mon kyaung*******************nor:)
decemberlion on Feb 20, 2010 0
ဆိုထားတာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး သပ်သပ် ယပ်ယပ်ရှိလိုက်တာ..ကီးကလည်း ၁၀၀% ကိုက်တယ်
moeluu on Feb 20, 2010 0
Nice classical.. it's really good to listen.. ko)phil, you sing so well here.. Thumbs Up!*
sumaylay on Feb 20, 2010 0
ko thut ......good......:P.*****
turikimuriki on Feb 20, 2010 0
song choice lote pay tae mama pp ka lae choose tat pa ....a so ka kg pee thar so taught perfect bae .... duet ko only one ka taught ma mite buu ... duet lay twe so par ohn byoo... especially like this song ... :P *****************
Ilovemusic on Feb 20, 2010 0
ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း.....သွပ်သွပ်ရေ.....၂ကိုယ်တူ ချစ်သမျှကို...တကိုယ်တည်း...ဟဲ သွားတာ.....ချိတ်မကောင်းဝူး...သွပ်...သွပ်...သွပ်...သွပ်....:P :P :P. (အရမ်းနားထောင်ကောင်းတယ် ဘော်ဒါကြီး.....ဖိုက်စတား နော်..။)
philtre on Feb 20, 2010 0
တဗွေထဲပေမဲ့ အသေလဲ ကြိုးစားပြီးဆိုထားပါကြောင်း ..း)
hippo on Feb 20, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးကြားရင် သင်္ကြန်မိုးရုပ်ရှင်ကို သတိရမိတယ် ... ဟုတ်ပါ့ sis PP ရွေးပေးတာတော်လိုက်တာ ... bro သွပ် အသံနဲ့ တော်တော်လိုက်တယ် ... နားထောင်လို့ ကောင်းမှကောင်း ... *****
သူတို့ကလဲ အေ၇ွးတော်တယ်ပဲ ပီပီမကိုဝိုင်းမြှောက်နေကြတယ်... ဒါနဲ့ပဲ သွပ်သွပ်ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် ရည်းစားတောင် သူ့ကို ရွေးခိုင်းချင်စိတ်ပေါက်လာဘီ... ဟိဟိ.. :P
Thanzinchitthu on Feb 20, 2010 0
bro yay ..so twar ayan good tal..vocal nae lal lite tal... arr pay nar sin twar p byar**************
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... သံစဉ်ကြိုက်သူ...း)
sweetorchid on Feb 20, 2010 0
နောက်ကျရင်ဒီသီချင်းလေးOrchid လာဆိုကူပေးမယ်နော်... Orchid ကိုလဲ ပြန်ဆိုပေး ကျော်သူစိုးနေရာကနေ Hip Hot ဆို မဲ့သူလိုနေလို့...ဟိဟိ ...ဆိုထားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ ဆား ပေါ့သလိုပဲ အမှန် ရှင်ဂွမ်းဂွကိုခေါ်ဆိုခိုင်းရမှာ...
သစ်ခွချိုက.. အချစ်မျှလိုတာသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်.. ဒါပေမဲ့.. သွပ်သွပ်က ရက်တွေ.. ကြွက်တွေဆိုးတတ်ဝူးရယ်... တော်ကြာ.. အပေးအယူညှိမရရင်.. ဖေးကူမိသမျှ အလကားဖြစ်ကုန်ပါဦးမယ်...အောချစ်လေးရယ်.. :D
paradise on Feb 20, 2010 0
hote pa..mamaPP ka choose pay tarataw taw dal......Thut Thut ka lalaso kg dort...shal pal port.......Thaw Ta Shin A Paung Ka Lal shwin lan par dal....Tay Than Shin THut THut gyi lal...lan par say....:D
သွပ်သွပ်ကြီးလန်ပါစေတဲ့... နဂိုကမှ ဂွမ်နေရတဲ့အထဲ.. လန်ခိုင်းနေတယ်.. ဒွတ်ခ..း) .. အားပေးတွားတဲ့ ဒိုက်ကလေးလဲ ဂိုက်ပေးကြမ်းသူနဲ့တွေ့ပါစေကွယ်..း)
lalaynge on Feb 20, 2010 0
မဖြိုး အရွေးတော်တယ်.. ဆိုသွားတာ အရင်ကသီချင်းတွေထက် ကျနော်ကတော့ ဒီသီချင်းကို ပိုကြိုက်တယ်... စုံတဲံဆိုရင်ပိုမိုက်မယ်..:D ******
အထီးကျန်သွပ်ကို .. အကြီးလှန်ချွတ်သွားတာလား.. အဟင့်...ဟင့်...း(... တွဲစရာမရှိလို့... အသဲမှာရိနေသူကို... အမြဲလာကလိနေတယ်... ဟွန်း... လလေးငယ်..ခဏတွေးကွယ်... တွဲဆိုပေးမလားပြောတာပါ.. ဟိဟိ... ကျေးဇူးနော်.. တရားခံကတော့ ဒီသီချင်းရွေးပေးတဲ့သူပဲ... နာ့ကို မလှိုင်ကပ်ပီး.. ကွိုင်ထပ်အောင်လုပ်တယ်..း( .. သူအမြှောက်ကောင်းလို့ဆိုရတာ.. ဟွန်း..